गरिब परिवारमा जन्मिएका युवकलाई पढाउने र इन्जिनियर बनाउने जिम्मेवारी लिए सोनु सुदले ! – AB Sansar
November 9, 2020 adminLeaveaComment on गरिब परिवारमा जन्मिएका युवकलाई पढाउने र इन्जिनियर बनाउने जिम्मेवारी लिए सोनु सुदले !
काठमाडौं । फिल्मको पर्दामा ड रलाग्दो रुपमा देखिने बलिउड चर्चित अभिनेता सोनु सुद दिलका भने निकै सफा छन् । हरहमेशा सहयोगका लागि तयार रहने यि खलपात्र वास्तविक जीवनमा भने आँफुलाई सेवामा स र्मपित गर्दै आएका छन् ।
कहिले बाडी पि डितका लागि राहात प्याकेज त कहिले जागिर गु मा एकाहरुका लागि सहयोग गर्दै आइरहेका सोनुले अहिले भने गरिब छात्रलाई इन्जिनियर बनाउने जिम्मेवारी लिएका छन् । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला *****
सहयोगका हात निरुन्तर फैलाइरहेका यि अभिनेताले अहिले युपीका सुर्यप्रकाश यादवको मद्दतका लागि अगाडि आएका छन् । उनको पढाइको जिम्म्ेवारी सोनुले नै लिएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
सोनुको सहयोगबाट युपी देवरियाका प्रकाश इन्जिनियर बन्नेछन् । सुर्यप्रकाशले सोनुलाई ट्याग गरेर लेखेका थिए, ‘सर मेरो बुबा छैनन् । आमा गाउँमा आशा वर्कर हुन् । हाम्रो आर्थिक स्थिति ठिक छैन । परिवारको वार्षिक आए ४० हजार रहेको छ । युपी बोर्डको १० कक्षाको परीक्षामा ८८ र १२ औंमा ७६ प्रतिशत मेरो अंक रहेको छ । मलाई पढ्न मन लागेको छ । प्लिज मेरो मद्दत गर्नुस् ।’ सुर्यप्रकाशले गरेको ट्यागमा अभिनेता सोनुले रिप्लाई दिँदै भनेका छन् ‘आमालाई भन्नु तपाइको छोरा इन्जिनियर बन्दैछ ।’***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला *****
Breaking : बिधुवा भत्तामा कटौती , ६० वर्ष ननाघेका एकल महिलालाई मासिक २ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता !